COOK OUT ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဆိုးဝါးဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးအရာများ - သတင်း
Cook Out ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဆိုးဝါးဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးအရာများ
၂၀၁၃၊ စက်တင်ဘာလမှာကျွန်မတို့ဒေသမှာမကြာသေးခင်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Cook Out ကမြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှူးအမြန်အစားအစာကွင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ Cook Out မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ Va၊ Bristol ရှိ Subway မှာအလုပ်မှထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဟာအများအားဖြင့်မောင်းနှင်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရံဖန်ရံခါခရစ်ယာန်ရေဒီယိုနဲ့အမြဲတမ်းဗလာကျင်းနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ချိုင့်ဝှမ်းမှာ, ည့်ခန်းမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်။ ငါအချိန်ပြည့်ကျောင်းတက်ချိန်မှာတစ်ပတ်ကိုနာရီ ၄၀ နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
သင့်အားနောက်ခံအနည်းငယ်ပေးလိုလျှင်သင်၏yourရိယာ၌တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မလုံလောက်ပါက Cook Out သည်ဘာဂါများ၊ ခွေးများ၊ အိတ်များ၊ ပြောင်းဖူးများ၊ ပြောင်းဖူးခွေးများ၊ အသားကင်များ၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ Cook Out Trays (အခွန်မပေးမီဒေါ်လာ ၄.၆၉ တန်ဖိုးနိမ့်တဲ့စျေးတစ်ခု၊ နှစ်ဘက်၊ ရေတစ်ခွက်ကိုရွေးနိုင်တဲ့မီးမောင်းထိုးပြ) နှင့်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ရင်လက်တွေ့ရေခဲမုန့်ပဲလိုသည့်လှုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျော်ကြားသည် ကောက်ရိုးတစ်ရွက်နဲ့တစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်ရင်မင်းစိတ်ပျက်သွားမှာပါ။ Cook Out ၏ drive-thru ကိုလည်းခက်ခဲ partiers အကြားကအကြိုက်ဆုံးအောင်, နံနက်ယံ၌သုံးသည်အထိဖွင့်လှစ်သည်။
ငါကမြန်ဆန်တဲ့ထင်ရသောပြောင်းလဲမှုအတွက်ဖန်ဆင်းသောကြောင့်, drive ကို - thru ၏အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရှုထောင့်ကိုချစ်၏။ သငျသညျ drive-thru, အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်, အထူးသဖြင့်တောင်ဘက်၌အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များကိုစုဆောင်းကြဘူး။ ဒီတော့နောက်ထပ် ado မရှိရင်၊ သူငယ်ချင်းများ esque အပိုင်းအကြီးအကဲများနှင့်ကျွန်တော် Cook Cook မှာအလုပ်လုပ်နေသောကျွန်ုပ်၏အရူးအမူးပုံပြင်များကိုမင်းကိုတင်ပြသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကလုပ်ဖော်တစ်ယောက်အားဆေးခြောက်ဝက်နှင့်ပေါင်းပင်ဂရမ်ပေးသည်
Heath Owen ၏ဓာတ်ပုံ
ငါပုံမှန်အားဖြင့်ရက်သတ္တပတ်၏နှောင်းပိုင်းတွင်ညဆိုင်းမှညနေခင်းဆွဲနှင့်တနင်္ဂနွေတွင်နှစ်ဆ, ဒါကြောင့်ငါမကြာခဏပိတ်နှင့်အတူနောက်ဆုံးမိနစ် 30 မှတစ်နာရီဖြုန်းချင်ပါတယ်။ အနီးကပ် / ညအိပ်ရာ ၀ န်ထမ်းများသည်သင်အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖောက်သည်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ပို၍ ပြင်းထန်သည့်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်ပြီးညအချိန်တွင်အရူးအမူးစွဲလမ်းကြပြီးသူတို့၏အိပ်ချိန်အချိန်ဇယားကိုထူးဆန်းသည့်နာရီများနှင့်ချိန်ညှိရသည်။
ဤအထူးနေ့ရက်သည်ငါမနက် ၁၀း၃၀ တွင် ၀ င် ရောက်၍ ည ၁၁း၃၀ အထိမအချိန်ပေးခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အတော်လေးရှည်လျားခဲ့သည်။ ပိုမိုနီးကပ်စွာမောင်းနှင်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်သက်သာရာရသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အစဉ်အမြဲဆက်ရှိနေမည်ဟုခံစားခဲ့ရသောပြောင်းလဲမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်ခါနီးပြီဖြစ်သည်။ သူမအတွက်ကောက်ရိုးများ၊ အိတ်များ၊ လက်သုတ်ပုဝါများနှင့်ခွက်များကိုသိုလှောင်နေစဉ်သူမသည်ညမတိုင်မီကစိတ်ဝင်စားခဲ့သောအတွေ့အကြုံကိုပြောပြခဲ့သည်။
ဒါငါ့အတွက်လား သူမက chuckling မေးတယ်။ သူမသည်သူမငါ့မွေးနေ့ဖွင့်ကဆက်ပြောသည်ရှေ့တော်၌ထိုလူရှုပ်ထွေးကြည့်ရှုပြောတယ်။ သူကသူမ၏ပူးတွဲပေးအပ်သူကပြောသည်, ထို့နောက်တစ် ဦး အိတ်များထုတ်လုပ်မတိုင်မီတစ်စက္ကန့်အဘို့မိမိကားထဲတွင်တူးဖော်ဆက်လက်။
သင်မသိလျှင်ကားမောင်းနေစဉ်ကားထဲတွင်အရက်ဘူးများဖွင့်ထားခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ပါ။ ၎င်းသည်ယာဉ်မောင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်လျော်ပါသည် အထူးသဖြင့် ယာဉ်မောင်းကို သို့သော်အနောက်တောင်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားတွင်ဤကိစ္စသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။ လူတွေကဘီယာကိုကြိုက်တယ်၊ အစိုးရကသူတို့ဟာအတော်အသင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်မောင်းဖို့အရမ်းမူးနေပြီလို့ပြောတာကိုမကြိုက်ဘူး။
ကားကိုပြတင်းပေါက်အထိဆွဲတင်လိုက်ပြီးကားရှေ့ကကားထွက်သွားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ။ ညနေခင်းညနေခင်းမှာဆိုတော့ငါအလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေ့လျားခဲ့တယ်။ ငါပြုံးပြီးလူကိုမိမိစုစုပေါင်းကိုပြောပြတဲ့အခါသူကသူ့ cupholder မှ Bud တစ်ပုလင်းပြန်။ တုံ့ပြန်, ချိုရှိတက် hol '။ Lemme git muh dollas ထွက်, နီးပါးနားလည်မှုအတိတ်နီးပါး။
သူကသူ့အရုပ်တွေမထုတ်ခင်သူ့အစားအစာကအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလူဟာသူ့အိတ်ကပ်ထဲမှပိုက်ဆံထုတ်ဖို့အရက်မူးနေလို့ငါတို့အချိန်တက်နေတုန်းကျွန်တော့်အဖွဲ့ကစိတ်မရှည်တော့ဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသည်အငွေ့ပျံနေသောအချိန်အတွင်းဘီယာကိုခေါက်လိုက်ပြီးသူ့အတွက်ကိုင်ထားခိုင်းသည်။
စိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာ။ ငါပြတင်းပေါက်ကနေပိုက်ဆံပေမယ့်ဘာမှယူခွင့်ပြုမထားပါဘူး, ငါရယ်မောရန်မရုန်းကန်, ပြန်လာ၏။
အိုး ငါနောက်ဆုံးတော့သူ့အိတ်ကပ်ထဲကနေသူ့ရဲ့ dollas လွတ်မြောက်လာအဖြစ်ငါထူးဆန်းသောဆူညံသံအစုတခုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ငါ darlin 'getcha ။ ငါကသူ့အိတ်ကိုကောင်တာကနေထုတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘီယာတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်တယ်။
တစ်နေ့ကျတော့အလုပ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါငါနဲ့အတူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာအမြန်ဆုံးခေါ်သွားတယ် ရှိခဲ့တယ် ပြီးခဲ့သည့်ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုကြားရန်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး ရောက်လာပြီးယောက်ျား၏ရေချိုးခန်း၌ရေလျှံခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိခဲ့သည်ဟုပြောသည့်အခါသူမသည် lob ည့်ခန်းမှတ်ပုံတင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ မည်သည့်အရာသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာဖြစ်မည်ကိုရှာဖွေရန်ကြောက်ရွံ့သောအားဖြင့်သူမယောက်ျား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားရေချိုးခန်းထဲတွင်ယောက်ျားမရှိသလောက်ကိုစစ်ဆေးရန် (ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) ကိုရှာဖွေရန်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်၊ သူကသူမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးခဲ့ပြီးသူမသည်သူမနှင့်ထိတွေ့မိနိုင်သည့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာများအတွက်သူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ထားသည်။
သူမသည်အနံ့သည်ဆိုးရွားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်၌ရေများလည်းရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်တစ် ဦး ရေလျှံသောအိမ်သာတစ်ခုကိုရှာရန်ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းသို့ဝင်ခဲ့သော်လည်းရှုပ်ထွေးမှုမရှိခဲ့ပါ။ သူ့ကိုယ်သူကံကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးသူမပြinvestigနာကိုစုံစမ်းဖို့ကျောထိပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ သူမသည်အိမ်သာနောက်ကျောတွင်ထိုးထားသောညစ်ညမ်းသောဘောင်းဘီကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ သူမအလုပ်လုပ်နေသောအထီးအလုပ်သမားကိုအပြင်သို့ထွက်ရန်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။
သူသည်ဘောင်းဘီရှည်ကိုကိုင်ရင်းသူ့လက်ကိုစက္ကူလက်သုတ်ပုဝါဖြင့်ရယ်မောလိုက်သည်။ OH GROSS! ဤအပေါငျးတို့သ SHIT ရှိပါတယ်! သူကရယ်မောခြင်းမှတဆင့်အော်။ သူတို့ကဘောင်းဘီကိုစွန့်ပစ်ပြီးဇာတ်လမ်းက ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့ဟောပြောမှုပဲ။
ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုသူတို့ကိုခေါ်လာတယ်။ ဒီအဆင်မပြေသောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။ အခြားခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု။
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့၏စပီကာများမှတဆင့်ဟယ်လိုဝိန်းဆောင်ပုဒ်သီချင်းကိုဖွင့်သည့်အချိန်
ဒီဇာတ်လမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် Cook Out တွင်စပီကာမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသင့်သည်။ အခြားအစာရှောင်ခြင်းအဆစ်များနှင့်မတူဘဲ Cook Out သည်နားကြပ်များကိုမသုံးပါ။ သူတို့မှာ drive-thru window မှာစကားပြောတတ်ပြီး (ကျယ်လောင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ နားကိုဆန့ ်၍ အကြိမ်များစွာကုန်လွန်ခြင်း) နှင့်မီးဖိုချောင်တွင်ဖွင့်ပြသူတစ် ဦး ရှိသည်။ ပြန်ပို့သည်
ဤသည်အထူးသဖြင့်ညဥ့်ဟယ်လိုဝင်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါလှည့်ကွက် -or- ကုသမှုကိုမြင်လျှင်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်မဟုတ်ဘဲ bummed ခဲ့သည် ဒါဟာည ၁၀ နာရီခန့်ဖြစ်ပြီး၊ စကားပြောသူမှအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အသံကြားရသည့်အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားမောင်းနှင်နေစဉ်စောင့်နေကြောင်းကျွန်ုပ်အားအသိပေးခဲ့သည်။
Cook Out မှကြိုဆိုပါ၏၊ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့မှာကြားမှုကိုယူလို့ရမလား ငါဖောက်သည်သူတို့အမြဲပြုသကဲ့သို့လမ်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်ဟုပြောသည်။ အဲဒီအစားစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာနှုတ်ဆိတ်နေပြီးကျွန်တော့်ကိုထိုးဖောက်မှတ်စုရေးထားတယ် သီချင်း လူကြမ်းဖြစ်သည့် Michael Myers ပေါ်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ဟယ်လိုဝိန်းရုပ်ရှင်များတွင်ပြသခဲ့သည်။ ၀ ယ်သူကစကားလုံးတစ်လုံးမှမပြောဘဲသီချင်းသာဆိုသည်။ သူသီချင်းသီဆိုပြီးသည်အထိမောင်းသည်။ အကြှနျုပျ၏ညဥ့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
တကယ်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးပြီးသားယောက်ျား ၂ ယောက်ကငါ့ကိုပါတီပွဲတက်ရန်ဖိတ်သည်
ငါ Claire ရဲ့မှာသင်ဝယ်ယူနိုင်အတုဘောင်နှင့်တူသော်လည်း, တကယ်တော့ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော), တကယ်တော့, ဆေးညွှန်း bifocals ဖြစ်ကြောင်း, ထိုအချိန်ကငါအလွန်ကြီးမားတဲ့မျက်မှန်ဝတ်ဆင်ကြောင်းပြောသဖြင့်ဤနိဒါန်းသင့်တယ်
အဖြူရောင် SUV ကားတစ်စီးကပြတင်းပေါက်ပေါ်တက်လာပြီးကျွန်တော်ကမင်္ဂလာပါလို့ပြောပြီးသူတို့စုစုပေါင်းကိုအမြဲပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပိုက်ဆံပြုံးပြီးလက်လွှဲပေးမယ့်အစားမျက်လုံးနီရဲနေတဲ့လူရွှင်တော်နှစ်ယောက်ကကြိုဆိုလိုက်တယ်။
အဲဒီမျက်မှန်ကိုဘယ်မှာရမလဲ။ ယာဉ်မောင်းမေးတယ် သူကငါ့ကိုလှောင်ပြောင်သို့မဟုတ်မလျှင်ငါမပြောနိုင်ဘူး။
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့စုစုပေါင်းကိုထပ်မပြောခင်ချက်ချင်းပြောတယ်။ သူတို့အတူတကွငွေများစုဆောင်းနေကြသည်၊ သို့သော်ယာဉ်မောင်းကကျွန်ုပ်အားပေးလိုက်သောအခါသူက“ ငါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပြတင်းပေါက်မပိတ်အောင်တားဆီးလိုက်ပါ။
ပါတီတွေဘယ်မှာလဲ။ ယာဉ်မောင်းမေးတယ် ငါစာသင်နှစ်အတွင်းဤသည် Bristol, Va ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါသတိပေးပါလိမ့်မယ် - အဘယ်သူမျှမပါတီများအရပျ၏မိနစ် 30 အတွင်းမှာသွားခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဂျွန်ဆင်စီးတီးပါ။ သင်ဒီမှာပတ်ပတ်လည်နေသောအရာကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး, ငါ Semite ယဉ်ကျေးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကမြို့ပြင်ကသာလာပြီးကျွန်တော့်ကိုရှုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ရင်ငါလည်းမလိမ်ချင်ဘူး။
ဘာ? ငါတို့အခုပါတီပွဲတက်ချင်တယ် ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင်ကောင်လေး whined ။ (ထိုအဟုတ်, ဟုတ်ကဲ့, ငါဆိုလို '' whined ။ 'သူ၏လေသံမကြာသေးမီကသူတို့တစ်ခုခုလုပ်လို့မရဘူးပြောသည်ခဲ့သည်နှစ်ခုနှစ်အရွယ်နှင့်တူ၏။ )
ကောင်းပြီ, ကလေးလုပ်ပြီးနောက်ဘာလုပ်နေလဲ။ ယာဉ်မောင်းကပြောတယ်
ငါ့ရည်းစား၏အိမ်သို့မိနစ် ၂၀ ကားမောင်းခြင်း, ငါသည်သူတို့၏အိတ်ချက်ချင်းလက်သို့သူတို့ကိုငါဆွဲ, ကဆိုသည်။ ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ! ငါပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်အဖြစ်ကပြောသည်
ငါတို့ထံမှအခမဲ့ပစ္စည်းများကိုလူများမည်မျှရယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုသင်မပြောနိုင်ပါ။ အခမဲ့အစားအစာ၊ အခမဲ့ပိုက်ဆံ၊ သောက်စရာတွေအခမဲ့၊ မင်းတို့နာမည်ပေးရင်သူတို့တောင်းတယ်။ ဤအထူးသဖြင့်အခြေအနေသည်နေ့လည်စာအလုအယက်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လူတယောက်ကဒေါ်လာ ၂၀ နဲ့သူ့ရဲ့ငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးခဲ့ရတယ်။ ငါလိမ်လည်မှုကိုစစ်ဆေးဖို့နှစ်ဆယ်ကျော်ကိုမမှတ်မိခဲ့ဘူး၊ ငါသူ့ကိုသူစားတဲ့အစားအစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအဝေးကိုကားမောင်းလိုက်တယ်၊ ပြောင်းလဲမှုကိုငါပေးခဲ့တာကြောင့်ငါမှတ်မိတယ်၊ ငါမှတ်မိသေးတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် lob ည့်ခန်းထဲမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကပြတင်းပေါက်ထဲကိုပြေးဝင်လာပြီးကောင်လေးတစ်ယောက်ကဒီကိုလာပြီးသူ့ကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာလို့ပြောတယ်။ သူကတကယ် pissed ရဲ့။ ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကကျွန်ုပ် post ည့်ခန်းကိုစွန့်ခွာဖို့အလုပ်မများသောကြောင့်မန်နေဂျာလုပ်ဖို့လော်ဘီလုပ်သားကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ ငါဆက်အလုပ်လုပ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အော်သံကြားရသည်။
အဲဒီစကားမပြောနိုင်တဲ့ကောင်မလေးကိုဒေါ်လာ ၅၀ ပေးပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကိုဒေါ်လာ ၂၀ ပြောင်းပေးတယ်။ ကျွန်မက ၀ င်ခါစလူကိုကြားခဲ့တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးစိတ်အေးအေးဆေးဆေးပေးပါ ငါသူမ၏မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်, တစ်မိနစ်ပဲ, ငါ့မန်နေဂျာငါ့ထံသို့ကူးမသွားမီကပြောသည်။ သူကသူ့ကိုငါတိုတောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲလို့ထင်သလားလို့မေးတယ်၊ ငါဟာဥပဒေကြမ်းကိုမှတ်သားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုအထင်အရှားမှတ်မိနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူကမှတ်ပုံတင်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ သေချာတာကတော့လုံးဝဒေါ်လာ ၅၀ မတွေ့ရဘူး။
ဆာ, အမှတ်ပုံတင်ထဲမှာမဆို $ 50s မရှိ။ ငါမှန်ကန်သောအပြောင်းအလဲကိုလက်ခံရရှိသည်ဟုသင်တို့အားအာမခံသည်မန်နေဂျာပြောသောစကားကိုငါကြား၏
သူမသည်ဝှက်ထားခဲ့ရပါမည်! သူ့ကိုယ်သူစောင့်ရှောက်! ငါသူမကို $ 50 ပေးတယ်။
ငါဝမ်းနည်းပါတယ်ဆရာ, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သူမထိုသို့ပြုလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြဘူး။ သငျသညျချင်ပါတယ်လျှင်ငါတိပ်ခွေပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ဘူး။
ငါအခမဲ့အစားအစာတောင်းဆို! သငျသညျအကြှနျုပျကိုတိုတောင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ကျွေးတဲ့အစားအစာနှင့်ငါ့နောက်လာမည့်တစ် ဦး ရွာသွန်းစစ်ဆေးချင်! ၀ ယ်သူကဒီအကြောင်းကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာငါမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ သူ၏မျက်နှာသည်အစဉ်အမြဲငါတစ် ဦး ချင်းရဲ့မျက်နှာသဘာဝကျကျဖြစ်လာမြင်ဖူးတဲ့ reddest ဖြစ်ခဲ့သည်။